Puntland oo dulaan ku ah Galmudud markay ka cabsatay Soomaliland |
Puntland oo dulaan ku ah Galmudud markay ka cabsatay Soomaliland
Brand Cialis buy online, order dapoxetine. Wararka naga soo gaaraya Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa sheegaya in Ciidamada Maamulka goor dhow lagu daadiyay inta badan Magaalada, gaar ahaan Dhanka konfurta Gaalkacyo.
Wararku waxa ay nagu soo gaarayaan in Ciidamadaasi ay wataan gaadiidka Dagaalka kuwooda gaashaaman, waxa ayna Farisimo ka sameysteen koonfurta Magaalada.
Saraakiisha Laamaha ammaanka ayaa la Tilmaamayaa in iyaga iyo gaadiid Ciidan ay si gaar ah u gaafwareegayaan wadooyinka Magaaladaasi ,kuwaas oo la sheegay in ay ka hortagayaan Weeraro Ciidamada Maamulka Galmudug ay ku qaadaan Garoonka Diyaaradaha Magaalada Gaalkacyo sida la sheegayo.
Dhaqdhaqaaqyada ay wadaan Ciidamada Maamulka Puntland, ayaa waxa uu imaanayaa xili maalmahaani uu soo ifbaxaayay Khilaaf xoogan oo u dhexeeyo Maamulada Puntland iyo Galmudug oo wada daga Gobolka mudug, kaasi oo salka ku haayo Xanimaad Maamulka Puntland uu saaray Garoon Diyaaradeed ee Koofurta Magaalada Gaalkacyo oo Galmudug ay Gacanta ku hayso.
Dhanka kale, waxaa laga cabsi qabaa in halkaasi uu ka dhaco dagaal dhex mara Puntland iyo Galmudug, waxaana weli arrintaani aan ka hadal Saraakiisha Ciidanka labada dhinac.